25-Izilwanyana ezifuywayo zihamba ngokufanelekileyo ukuya echibini kunye nekhitshi egcweleyo ye-DWTN
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguEagle Cap Real Estate
I-Eagle Cap 25, ipropathi yomgangatho we-2, ikwindawo eyodwa engaphantsi kweekhilomitha ukusuka eWallowa Lake. Ekufuphi nendlela yebhayisekile yeW. Lake kunye nokuhamba okufutshane ukuya edolophini uJoseph (1/2 yeemayile). Izilwanyana zasekhaya zamkelekile kwiyunithi ngexabiso le-$ 25 / ubusuku. Siyakucela ukuba ugcine izilwanyana zakho kwifenitshala kunye neebhedi kwaye ungazishiyi kwiyunithi zingajongwanga. Inqwelwana/inqanawa yokupaka kwindawo.
Le ndlu ikwindawo ezolileyo ene-4-plex malunga ne-1/2 yeemayile ngaphambi kokuba ifike eWallowa Lake. Indlela yebhayisekile egcinwe kakuhle ekhokelela echibini iphambi kwe-4-plex. Le flethi isandula ukuhlaziywa ngokulungiswa okutsha kunye nezixhobo zombane.
Le yipropathi elungele izilwanyana. Nceda ujonge imigaqo-nkqubo yethu yesilo-qabane kwicandelo "lezinye izinto ekufuneka uziqaphele" ngezantsi
Iyunithi ibekwe ngokulula phakathi kweWallowa Lake kunye nedolophu yaseJoseph. Zombini iindawo ekufikelwa kuzo ziihambo ezimfutshane ezimalunga ne-1/2 yemayile.
Umbuki zindwendwe ngu- Eagle Cap Real Estate
Eagle Cap Real Estate ibekwe eWallowa County. Bobabini abazalwana bakaMcKee (uTodd kunye noAndy) bangaphakathi kwimizuzu yepropathi, ukuba kukho imfuneko.
UEagle Cap Real Estate yi-Superhost